Chambre Architect of the Republic of Poland → DAHOLO FOTOTRA TANANA
Na dia, Asa matihanina dia asa mahaleo tena afaka mitondra fahafaham-po be sy tombontsoa ara-materialy, fa ny làlan'ny fanombohana asa amin'ny maha mpanao maritrano azy dia sady tsy tsotra no tsy fohy. Ho fanampin'ny dingana mazava ho azy amin'ny fandalinana sy ny fandalinana mafy dia tsy maintsy an'ny IARP (Chambre Architects ny Repoblika Polonina).
Ahoana no fomba hahalasa ny maritrano?
Ny lohatenin'ny injenieran'ny maritrano dia azo raisina aorian'ny famitana ny fandalinana voalohany. Ny mari-pahaizana master momba ny injeniera mpanao mari-pahaizana dia azo rehefa vita ny fandalinana dingana faharoa. Ny lohateny kosa dia tsy manome alalana avy hatrany ny fampiharana ny asa. Araka ny lalàna Poloney, ny olona iray ao amin'ny lisitry ny Antenimieran'ny Arkitekin'ny Repoblikan'i Polonina dia mpanao mari-pahaizana mahay mampihatra ilay asa. Ny IARP noho izany no vavahady asa tokana ho an'ny mpanao mari-trano maniry maniry hahavita ny tetik'asa ara-barotra voalohany nataony.
Hitanisa ity pejy ity IF Design Award 2020 ho an'ny marika Metalco ho an'ny fialofana fiara fitateram-bahoaka, izay tafiditra amin'ny tetikasan'ny SMART CITY
Ny Chamber of Architects of the Republic of Poland dia vatana izay ny andraikitra lehibe narafitra tamin'ilay statut dia ny fiarovana ny habaka ary, ambonin'izany rehetra izany, ny arsitektika izay raisina ho tombontsoam-bahoaka. Ankoatr'izay, ny IARP dia manara-maso ny fahitana tsara ny fiasa ara-teknika ampiasaina amin'ny fananganana ary manamarina ny kalitaon'ny fahaiza-manao fananganana ampiasaina amin'ny haino aman-javamaniry. Mazava ho azy fa ireo mpikambana ao amin'ny Chamber of Architects of Republic of Poland ihany no fanaraha-maso io. Noho izany antony izany, dia zava-dehibe tokoa amin'ny arsitekan'ny tanora izay te hanao ny voalohany tetikasa ara-barotratafiditra ao amin'ny IARP.
Hitanisa ity pejy ity Lalàna momba ny fananganana sy ny fananganana trano
Asa sy hetsika ataon'ny Chamber of Architects ny Repoblika Polonina
Ny Chamber of Architects of the Republic of Poland dia mifandraika ihany koa amin'ny asa fanampiny, izay misy, anisany: ny fitazonana ny asan'ny maritrano ho toy ny mahaleo tena, miaro ny lohatenin'ny IARP Architecture, mamolavola fenitra maromaro mifandraika amin'ny fanatontosana ny asa amin'ny alàlan'ny arsiteky, miasa amin'ny fitsipika ary manitsy ny fitsipika momba ny fandoavan'ireo mpikambana, ary koa ny fikatsahana ny hampiditra programa mifanaraka amin'ny programa EU eo amin'ny oniversite poloney.
Amin'ny fanatontosana ny hetsika fanampiny dia miara-miasa amin'ny governemanta matihanina manokana ny injeniera mpanamboatra matihanina ny IARP. Ny Chamber of Architects of the Republic of Poland ihany koa dia miara-miasa amin'ny fikambanana maro hafa mba hahatratrarany ny tanjony. Ny Chamber of Architects of the Republic of Poland dia tsy vitan'ny andraikitra amin'ny fametrahana fitsipika sy ny fenitry ny asa fa mifantoka amin'ny asa fampianarana, siantifika, kolontsaina ary teknolojia-teknika ihany koa.
Na dia eo aza ny hetsika mivezivezy ao amin'ny IARP, tokony ho tsaroana fa ny tanjona voalohany dia ny fiarovana ny habakabaka sy ny maritrano ho fahatongavan-bahoaka. Ny hetsika rehetra sy ny rafitry ny IARP rehetra dia mifantoka tsara amin'ity tanjona ity, ary ny hetsika rehetra dia tokony ho jerena ho fanampin'ity asa fototra ity.
Ny firafitry ny IARP dia misy National Chamber of Architects miampy ireo manampahefana, ary koa ny efitrano misy any amin'ny distrika 16.
Ny zon'ny mpikambana sy ny adidy
Amin'ny fananana ny IARP, ny mpikambana dia afaka miantehitra amin'ny tombontsoa sy zo sasany izay tsy ho azon'izy ireo hankafy raha tsy mpikambana ao amin'ny efitrano. Amin'ny lafiny iray, ny fandraisana anjara ao amin'ny Chamber of Architects of the Republic of Poland dia koa mitaky andraikitra vitsivitsy.
Ireo adidy ireo dia: ny fitandremana ny etika matihanina ary ny fampifanarahana amin'ny fitsipika ao aminy, fiaraha-miasa amin'ny Chamber of Architects of the Republic of Poland, ny fanarahana ireo fitsipika sy fitsipika mifandraika amin'ny fahalalana ara-teknika ary clothingist, mijoro amin'ny fanatanterahana ny fanapahan-kevitra IARP ary mandoa ny saram-panao tsy tapaka.
Ireo mpikambana ao amin'ny IARP dia afaka miantehitra amin'ireto zon'olombelona manaraka ireto sy ny tombontsoany: azon'izy ireo mampiasa hetsika fanampiana fanampiana sy fanampiana ara-dalàna ao amin'ilay efitrano, ary afaka manampy izy ireo amin'ny fanatsarana ny maha-izy azy matihanina.
Hitanisa ity pejy ity Vilany misy zaridaina sy ny akany - iza no tsara indrindra?
Rehefa manoratra momba ny Antenimieran'ireo mpanao mari-trano ao amin'ny Repoblikan'i Polonina, dia tsy azo atao ny manonona ny Komitin'ny Fahaiza-manao Nasionaly. Izy io dia tompon'andraikitra amin'ny fanomezana mari-pahaizana matihanina. Vondron'olona manokana izay voafaritra ao amin'ny lalànan'ny efitrano koa. Tsy isalasalana fa izay mpanao mari-trano maniry maniry hahazo ny fahaizany dia tsy maintsy miatrika ny Komitin'ny Fahaiza-manao Nasionaly. Ho fanampin'izay, ny hetsiky ny Komitin'ny Fahaiza-manao Nasionaly dia misy koa ny fanaraha-maso ireo hetsiky ny komity mifantina, ary ny asany dia faritan'ny lalàna sy ny lalàna izay tokony hiasa ao.
Fitantanam-bola ny Chamber of Architects ny Repoblika Polonina
Mba hampandehanana ny IARP dia mila miasa ny fananana sasany. Noho ny tanjon'ny famatsiam-bola, ny Chamber of Architects of the Republic of Poland dia mahazo vola amin'ny saram-pianarany, avy amin'ny asa fandraharahana, fanomezana sy famatsiana vola, ary koa ny vola hafa. Ny hetsika ara-toekarena izay mety tarihin'ny talen'ny distrika sy ny Chambre nasionaly IARP dia tsy voafetra ihany fa tsy mety ho hetsika fampiasam-bola, ary koa ny hetsika amin'ny sehatry ny famolavolana, fananganana, ny asa ho an'ny daholobe ary ny fanabeazana. Ny fameperana toy izany dia tokony ho gaga amin'ny olona rehetra - ny asa aman-draharaha dia tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny fahaleovantenan'ny Chamber of Architects of the Republic of Poland.
Silesian Chamber of Architects ambanyefitrano an'ny arisivany tranon'ny mpikaroka gdańskChamber of Architects KatowiceChamber of Architects Krakowtranon'ny arsiteky sambotranon'ny mpikatroka hosokaNy Chamber of Architects Lublinny Chamber of Architects any Olsztynny tranon'ny mpikatroka poznańChambre Architects ny Repoblika Poloninany Chamber of Architects ny Repoblika PoloninaSilesian Chamber of Architectsefitrano an'ny arsiteky heryChambre ofis Archivesefitrano an'ny arisialy wrocławefitrano nasionaly an'ny arisialyAmberódź Chamber of Architectsny efitrano Małopolska Chamber of ArchitectsMałopolska Distrikan'ny Distrikan'ny ArchitectsChamber of Architects MazovianChambre d'Ivoire de Masovian DistrictOpole Chamber of ArchitectsChamber of Architects poloneyChambre d'Éditorian PomeranianSilesian Chamber of ArchitectsSilesian Chamber of ArchitectsWielkopolska Chamber of ArchitectsWest of Pomeranian Chamber of Architects